अन्तिप पटक छोरी भागिरथले बोलेको त्यो शब्द, बाटो हेरेर आँखाहरु थाके तर छोरी फर्किनन् – (भिडियोसहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अन्तिप पटक छोरी भागिरथले बोलेको त्यो शब्द, बाटो हेरेर आँखाहरु थाके तर छोरी फर्किनन् – (भिडियोसहित)
बैतडी । घरको दैलोमा बस्दै बाटोतिर एकोहोरो हेरी रहेकी यी आमा । जस्को ओँठमुख सबै सुकेका छन् । यिनलाई न दिनको भोक छ न त रातको निंद नै छ । छ त केवल आफ्नै जिन्दगीको सहनै नसक्ने पि’डा ।यिनी हुन् स्कूलबाट अहिलेकी चर्चित दुखद घटनाकी पात्र भागरथीकी आमा । जस्को आखाँबाट बर्रर आँशु झरि रहेको छ तर पुच्छ्ने हेक्का भने छैन । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
फुल्चोकी जंगलमा वर्षेनी किन हराउँछ मान्छे ? प्रहरीले गर्यो कडाई
ललितपुर । ललितपुरको फुल्चोकी डाँडामा वर्षेनी मानिस हराउने गरेका छन् । कतिपय व्यक्तिको त मृत्यु समेत हुने गरेको छ । यस वर्ष भने फुल्चोकी जानेहरुलाई प्रहरीले कडाई गरेको छ ।
फुल्चोकी डाँडामा हिउँ पर्नासाथ त्यसतर्फ जाने मानिसको घुईँचो लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकाको नजिकै रहेको र आकर्षक स्थान भएकाले पनि त्यसतर्फ जानेको घुईँचो लाग्ने गरेको हो ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने फुल्चोकी डाँडा २ हजार ६९१ मिटर उचाईमा छ । जाडो याममा हिउँ पर्ने कारण आन्तरिक पर्यटकको घुईँचो लाग्ने गर्छ ।
आइतबार बिहानबाट महानगरीय प्रहरी प्रभाग बाडेगाउँले फुल्चोकी प्रवेश गर्नेहरुलाई सचेत गराएर मात्र पठाउने गरेको छ । आइतबार मात्र फुल्चोकी ५ सय बढी गएको रेकर्ड प्रहरीसँग छ ।
प्रहरीले गोदावरी बसपार्क नजिकै दैनिक चेकजाँच गर्ने, पर्यटकको विवरण राख्ने गरेको छ । साथै, जंगल प्रवेशका क्रममा हराउने समस्याबारे सचेत गराउने, भौगोलिक अवस्थिति झल्किने नक्सा सहितको बोर्ड, सचेतनामुलक बोर्डहरु राखेर जानकारी गराउने गरेको ललितपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।पैदल जाने पर्यटकहरुलाई दिनको १ बजे र सवारी साधन सहित जानेका लागि दिनको २ बजेसम्म मात्र प्रवेश गर्न दिने गरेका छन् ।
आइतबार मात्र पनि साँझ ६ बजे दुईजना हराएको सूचना आएपछि प्रहरीले खोजविन गरी उद्दार गरेको छ । उनीहरुलाई गोदावरी नगरपालिका २ चापाखर्कमा फेला पारेका थिए । सिन्धुलीका प्रशान्त थापा र दोलखाका सुरेश केसीलाई उद्दार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
५५ वर्षीया प्रेमिकाले ३२ वर्षीय प्रेमीसँग गरिन् यस्तो काम, प्रहरीले खोज्दै जाँदा पर्यो छक्क